SIPHEPHA UKUKHETHA KWAKHO KAKHULU
IGianty ingumkhiqizi ohlanganiswe ngokuphelele nokwakhiwa okungaphakathi kwendlu, ukuthuthukiswa kokufana, kanye nomkhiqizo womkhiqizo. Inkampani yakhele ithimba le-R&D elite nabantu abangochwepheshe kwezobuchwepheshe abasebenza ngobunjiniyela obukhulu, ucwaningo lwe-bioplastics, kanye nentuthuko yezibonelo. Ithimba le-R&D lenza futhi lisebenzise ucwaningo lwesayensi ukuthuthukisa imikhiqizo ekhona nokuthuthukisa imikhiqizo emisha ukuze kusizakale amakhasimende. Isipiliyoni somkhakha ocebile nobuchwepheshe kusiza ekwakheni imikhiqizo ehambisana nezidingo ezithile zemakethe.
GABULE IZINDABA EZIPHAKAMILE KOKUTHENGA KAKHULU
I-EU Isiyingi Sesenzo Somnotho Sokuphinda sibuye sisebenze idrayivu yokupakisha eco-friendly
IKhomishini yaseYurophu yamukele uhlelo olusha lwe-Circular Economy Action lapho lubeka kuqala ukunciphisa ukweqisa nokubeka imfucumfucu, ukwakhiwa kokushayela kokupakishwa okungenzeka futhi okungenzeka kabusha futhi kunciphise nobunzima bezinto zokwakha. Uhlelo, olukhonjwa yiKhomishini njengolunye lwezentuthuko ...
Ukubuyekezwa kweMbukiso yeGianty
Ngonyaka odlule, saya eCanton Fair, NRA eChicago nase-PLMA e-Amsterdam. Ngenyanga edlule sisanda kuhambela kwa-HRC sisuka kuMar 3rd-5th - umcimbi omkhulu futhi ohlonishwayo e-UK. Umkhakha wokudla we-UK kanye nowokungenisa izihambi wase-UK wamukelwa emhlabeni wonke njengowaphambili ...
KANYE NOKUFINYELELA KAKHULU KOKUFANELEKA KAKHULU KOKUTHENGA KAKHULU
ICPLA Compostable Cutlery Box Box ngeDispla ...
ICPLA-Sustainable Cutlery Renewable Cutlery ...